Saina noma Signa - kuyini? Okokuqala, kuba into efanayo. Okwesibili, uma namanje abazi ke sekuyisikhathi ngenzele ngisho olahlekile ungqimba emasiko imfundo yakho. Izithombe ezisuka Signa - Namuhla lo mkhuba nemfashini in amanethiwekhi eziningi emphakathini. Kubonakala sengathi lokhu ngokuvamile kanje: umzimba female ezikhangayo uthi igama womuntu noma isidlaliso. Okubaluleke kakhulu, kube yigama ngokunembile akufanele basonta umnikazi amafomu zikanokusho. Nokho-ke kufanele kuqashelwe ukuthi Signa samanje kumelwe nakanjani ibhalwe ngesandla, futhi noma kunjalo ayikwazi ukwengezwa esithombeni usebenzisa abahleli isithombe ezifana Paint noma "Photoshop".
Okuchaza Signa? Kuyini - "ukwenza Signe?"
Igama elithi "Signa" has kwaqala IsiZulu: "uphawu" kusho "uphawu", "uphawu", "uphawu". Igama intombazane sakhe esikhethiwe ungabhala kunoma iyiphi ingxenye yomzimba - izingalo, izandla, iminwe, entanyeni, esiswini, imilenze, emuva nezinqulu, kodwa sexy kunazo ubukeka Signa phezu kwesifuba noma ezinqeni. Ivunyelwe nezinketho ezifana igama nje lishicilelwe ephepheni, enamathiselwe izingubo noma bagcinwa bengenalwazi izandla kanye izithombe ukuze okucashunwe kumele awela uzimele. Khona-ke, lo mdwebo omuhle okuholela ithunyelwa bani lanikezelwa. Njengomthetho, Signa umzimba amantombazane esenzelwe labangani asondelene nabo kanye abalandeli, kodwa ubuhle abaningi abasha futhi engumthengisi kwaba ayinangozi kumnandi umthombo eyengeziwe imali. Girls ukudweba igama lanoma isiphi yomunye emzimbeni wakho esenana amavoti, ngomqondo ongokomfanekiso, lwemali ezifuywayo zokuxhumana sites ezifana "VKontakte" noma Facebook. Izithombe eziveza amaqiniso iningi, eneka izitho zangasese, ikhokhwe njalo ngaphezulu. Futhi, Signa ikhasimende kuyinto hlobo lokukhangisa, uhlobo PR. Ngemva eqoqwe ekhasini wakhe isithombe yilezozintombi enhle, "sigqoke" kuphela egameni lakhe ukuthi nakanjani ukhange izinkulungwane abasebenzisi, nabangane nabantu obajwayele, hhayi kuphela lakhe siqu kodwa futhi ubuhle abasha ukuthi sithuthukise ngokuzenzakalelayo isimo ukuzethemba le nsizwa. Kukhona nje abathelisi. Ngoba umuntu wokuzilibazisa enjalo Kungase kubonakale kungavamile, kodwa empeleni akusona sibi kakhulu kunanoma iyiphi enye Yiqiniso, kuphela uma kwenzeka ukuthi akububonisi iyiphi lingavumelani izithombe zocansi.
ubuqili Business in zokuxhumana nabantu
Njenganoma yimuphi omunye ibhizinisi, ikakhulukazi uma enikeziwe yokufihla onobuhle kungenzeka, ukuthengiselana ukuthenga nokuthengisa Sig singangena kakhulu zonke izinhlobo ukukhwabanisa, kokubili lowo ongcwelisayo kanti olunye uhlangothi. Intombazane ungathola imali kusengaphambili futhi akazange anikeze Signa, ukufinyelela eduze ikhasi lakho, futhi ikhasimende - ukuthola isifinyezo futhi engakhokhi. Ngakho-ke kunengqondo ukusebenzisa ezimweni ezinjalo isikimu ebucayini yokukhokha: ikhasimende kwenza ukukhokhela ngaphambili 50% of the abavumelana lemali, imodeli ithumela isithombe izinga abampofu, ikhasimende okhokhela ibhalansi imali bese uthola version eliphezulu Signa.
Kungani usadinga Signa?
Kuyini lapho isithombe blonde kuhle abasha, futhi qapha lover chubby ubhiya popcorn - cishe laziwe kubo bonke. Ngakho lapho Signa kuzokusiza ukuqinisekisa ukuthi esikhathini isidlaliso limenyezelwe lihlala phezu inethiwekhi ungumuntu osifanele engibathandayo yena futhi ozibiza. ezibalulekile kulezi zimo videosigny lapho intombazane kungaba ngqo ikhamera ukusho Imininingwane nabangane eyaziwa kuphela Ikakhulukazi. Uma intokazi ufuna ngokuzumayo ukuze zibonise yakhe umfana uzwela ozithandayo futhi sikwenze ngendlela ethile ekhethekile, nalapha futhi, kungavela ukusiza Signa. Kuyini lapho umzimba obukeka emuhle sika flaunts igama lakho, awudingi ukuba ngichazele guys - kungcono Day enhle! Kasibili akekho ongasho ngokuqiniseka ukuthi bahlala banganandaba. Empeleni, namuhla Signa sekuthandwa kakhulu, izithombe babe ukusetshenziswa sihle futhi kangcono amakhamera ezibizayo, izibani futhi ezithakazelisayo art lettering. Kwazi bani, mhlawumbe sibonga Signe art umzimba art uzothola isiqondiso zobuciko?
Imaski eliphumelelayo isikhumba evamile
Ukwelashwa okuphephile indlebe acinene